Warshad Soo-saareyaasha Haydarooliga - Soosaarayaasha Cuntada-shidaalka Shiinaha, Badeecado
Truck Telescopic Haydarooliga ...
HSG01-E Taxanaha Haydarooliga Cy ...
Dhulgariir dhululubada dhululubada
Bastoolad Haydarooliga ah
Faahfaahinta Wax soosaarka: 1.Hindiyaha silsiladda ceelka Haydaarka dhululubo waxaa lagu dooran doonaa iyadoo loo eegayo cadaadiska shaqada, heerkulka shaqada, xaaladda shaqada iyo shuruudaha kale ee gaarka ah. 1.1 Tubada Silsiladda: saxan qabow oo la soo jiiday tuubo bir ah oo aan xaddidnayn, tuubbo bir ah oo aan xaddidnayn oo kulul, tubbo been abuur ah. 1.2 Qalabka Tube: SAE1020 (20 #), SAE1045 (45 #), 16Mn (Q345B), 27SiMn, iwm. 1.3 Qallafsanaanta Dhulka: R0.16-0.32μm 1.4 Gudaha Chromating: Haddii loo baahdo, tuubbada gudihiisa ayaa laga dhigi doonaa chromated. 2.Piston ul 2.1 Udubka Waxyaabaha: 35 #, SAE1045 (45 #) ...
Silsilad Haydarooliga Hawada
Faahfaahinta Badeecada Haydarooliga waa nooc ka mid ah qalabka rarida walxaha casriga ah. Ilaa iyo inta ay kaydsan tahay, si otomaatig ah oo toos ah ayay u dejin kartaa qalabka. Waxtarka dejinta ayaa aad u sarreeya boodhkuna wuu ka yar yahay. Qashin-qubka ayaa u baahan inuu bilaabo matoorka saldhigga hawo-qaadka si uu gacanta cadaadiska ugu kiciyo meel sare, ka dibna baabuur gondola oo si buuxda u buuran waxaa jiidaya mashiinka culus ee gawaarida, wuxuuna ku yaal gaariga taageeraya dogobka qashin-qubka. Qalabka gariirka saxanka gadaashiisa waa malax ...
HSG01-E Taxanaha Qalabka Hydraulic
Faahfaahinta Waxsoosaarka HSG injineernimada nooca injineernimada waa silsilad laba nooc oo silsilad hiddo ah oo hiddo ah, taas oo leh astaamaha qaab-dhismeedka fudud, hawlgalka lagu kalsoonaan karo, isku-habboonaanta iyo kala-goynta, dayactirka fudud, qalabka keydka iyo habab xiriir oo kala duwan. Waxaa inta badan loo isticmaalaa mashiinada dhismaha, gaadiidka, rarka, mashiinada wiishka, mashiinada macdanta iyo warshadaha kale. Cilmi baaris iyo Naqshadeyn 1. Shirkadeena waxay leedahay 6 injineero oo leh 20 sano, 40 sano oo ...
Gawaarida Telescopic Haydarooliga
Faahfaahinta Waxsoosaarka 1. Dhulbeereedka Haydarooliga Telescopic waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dhul-dhululubo heer-sare ah. Waxay ka kooban tahay laba ama dhowr mashiinno heer-sare ah, oo inta badan ka kooban madaxa silsiladda, foosto silsilad ah, gacmo-gacmeed, bastoolad iyo qaybo kale. Waxaa jira dekedo laga galo iyo kuwa laga baxo a iyo B labada daraf ee foosto dhululubo ah. Marka saliidu soo gasho dekedda a iyo saliida ka soo laabato dekedda B, bistoolada heerka koowaad oo leh aag wax ku ool ah oo weyn ayaa la riixayaa, ka dibna bistoolada heerka labaad ee yar ayaa dhaqaaqaysa. Sababtoo ah heerka socodka ...
Faahfaahinta Badeecadda 1. Inta badan annaga ayaa loo habeeyay qotodheer waaweyn iyo heer dhexdhexaad ah. Waxay ku habboon tahay xaaladaha cadaadiska ugu sarreeya ee 350 kgf / cm and 2 iyo heerkulka - 20 ℃ - 100 ℃ (qeexidda aagga qabow waa - 40 ℃ - 90 ℃). Noocyada Muhiimka ah 2.a. Cabbirka yar, culeyska fudud iyo xoogga sare: xulashada maaddada, farsamada farsamaynta iyo tikniyoolajiyada alxanka ee jirka dhululubo iyo bistoolad bistoolad ayaa la korsaday iyadoo loo eegayo xoogga, naqshadda daalka iyo xayeysiinta ...
Tilmaamaha Waxsoosaarka 1.Excavator taxane ah oo laba jibaaraya hal baaldi oo dhululubo ah oo shidaal ah ayaa loo isticmaalaa sida isu-celinta waxqabad dhaqaaqa toosan ee nidaamka hidda-qodayaasha. Taxanaha kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka waa nooc ka mid ah waxsoosaarka hawo-qaboojiye ee si gaar ah loo baaray loona soo saaray Komatsu iyo Kayaba tiknoolajiyadda Japan. Waxay leedahay astaamaha cadaadiska shaqada ee sarreeya, waxqabadka lagu kalsoonaan karo, rakibidda habboon iyo kala-goynta, dayactirka fudud iyo qalabka wax lagu keydiyo. Dhamaan shaabadaha tan ...